बिवाह गरेको केहि महिनामै श्रीमतीको सिन्दुर पुछियो, शव देख्दा आमा सडकमै ढलिन ! (भिडियो सहित ) – Khabar PatrikaNp
बिवाह गरेको केहि महिनामै श्रीमतीको सिन्दुर पुछियो, शव देख्दा आमा सडकमै ढलिन ! (भिडियो सहित )
August 16, 2020 52
काठमाडौ । बुहारी भित्र्याएको तीन महिना नहुँदै आफ्नो छोरालाई गु’माउनु परेपछि नुवाकोटका लक्ष्मण तामाङकी आमाले मन थाम्न सकिनन् । लक्ष्मणको श्रीमती र उनको पूर्व प्रेमिकाको ग्या’ग फा’इटमा अनाहकमा निधन भयो । उनलाई छु’री प्र’हार गरी ज्यान लिएको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । लक्ष्मणको श्रीमती सोनु श्रेष्ठले आफ्नै आँखा अगाडी श्रीमानको ज्या’न लि’एको बताइन् ।
उनीहरु अघिल्लो दिन मात्र नयाँ कोठामा सरेका थिए । परिवारमा खुसी थियो । मासु ल्याएर मिठो खाना पकाएका थिए । खान लागेकै थिए त्यतीबेला लक्ष्मणको बारेमा खबर आयो । खान लागेको खाना छोडेर हिडेका उनीहरुले दुई दिन देखि केही खाएका छैनन् । छोराको श’व देखेर आमा बे’होस भएर बाटोमै ढ’लिन् । उनले छोरा नभएपछि अब म पनि रहन्न भन्दै आमा भक्कानिएपछि संगै रहेका अर्का छोरा पनि मन थाम्न सक्दैनन् । सडकमै शो’काकुल हुन्छ । आमाले अब म पनि बाँच्दिन भन्नुहुन्छ अब म के गर्ने ? अर्का छोराले भन्छन् । आमा म’र्यो भने हामी के गर्ने ? छोराले निकै लाचारीका साथ भन्छन् । दृष्य हेर्दा नै निकै मार्मीक देखिन्छ ।
लक्ष्मणको ज्या’न लिने प्रेमीकाका समुहका आङदोर्जे शेर्पालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शेर्पालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीले श्रीमती र पूर्वप्रेमिकाबीचको वि’वादका कारण उनको ज्या’न गएको खुलेको हो । लक्ष्मणलाई उनको पूर्व प्रेमिकाको समुहले ज्या’न लि’एको हो । लक्ष्मणले तीन महिना अघि मात्र सोनाुसंग विवाह गरेका थिए । सोनुसंग विवाह हुनुअघि उनको अर्की युवतीसंग प्रेम थियो । तर उनीसंगको प्रेम छुटेपछि लक्ष्मणले सोनुलाई विवाह गरेका हुन् ।
पूर्व प्रेमिकाले केही बेर भेट्न आउ कुरा गर्नुछ भनेर बोलाएपछि उनी गएका थिए । उनी काठमाडौको मनमैजु स्थित मितेरी पुलमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनको पूर्व प्रेमिका गु’ण्डा लिएर आएकी रहिछन् । श्रीमती सहित गएका लक्ष्मणलाई श्रीमतीकै अगाडी ह त्या गरेका हुन् ।
सोनुले श्रीमान लक्ष्मण, भाइ समिर श्रेष्ठ र लक्ष्मणका दाइ शंकरलाई बोलाइन् । यता लक्ष्मणको प्रेमका पुष्पाले भने आङदोर्जे, रबिन तामाङ, दिनेश तामाङलगायतलाई बोलाइन् । दुवै पक्षबीच भि’ड’न्त भयो । आङदोर्जे समुहको आ’क्रम’णमा परी लक्ष्मणका दाइ शंकरको आँखामा चो’ट लागेको छ भने श्रीमती सोनु पनि सामान्य घाइते भएकी छन् छन्। आङदोर्जेका साथी दिनेश तामाङ पनि घाइते भएका छन् । आङदोर्जेले तामाङलाई छातीको बाँया भागमा छु”’रा प्र’हा’र गरी ज्यान लिएको खुलेको छ।
शुक्रबार राति मितेरी पुल नजिक दुई समुहबीच झ’’ड’प हुँदा २४ वर्षीय तामाङको निधन भएको हो । घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले तीन जना युवकलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।शुक्रवार राति करिब साढे ८ बजेतिर घटना भएको हो । घाइते लक्ष्मणको उपचारको क्रममा ग्रिनसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले लक्ष्मणकी पूर्वप्रेमिका पन्तसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
Prevकोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केकको चार घण्टा नबित्दै मृ,त्यु भएपछि……..
Nextकालीकोटको यो म’र्माहत पार्ने दृश्य : एकै घरका6जनाको पहिरोले पुर्यो गाउनै आशुमा डुबेर सा’मुहिक अ’न्त्य ।
हलेशी महादेबको दर्शन गर्दै भोलि असोज १७ गते । शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस
एक अर्व रुपैयामा किनेका रेल यसरी पार्किगंमा थन्क्याइयो
सबै जना सचेत रहनुहोला ! छोरीले फोनमा के गर्दिरहिछिन् खाताबाट १७ लाख रुपैयाँ बेपत्ता
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27993)
दु:खद खबर : सडक दुर्घटनामा परी महिला नेत्री भागिरथी रेग्मीको निधन !
गायिका टिका सानुको विहे भएकै हो त ?
गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको : अख्तियार